Wasiir dhaleeceeyey shirkad duulimaad - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiir dhaleeceeyey shirkad duulimaad
La daabacay onsdag 28 augusti 2013 kl 12.31
Duuliyaasha shirkada duulimaadka Ryanair ayaa sameystey shabakad sir ah oo u dooda arimahooda shaqo maadaama ay ka cabsi qabaan duuliyaasho hadii ay si muuqata uga isku abaabulaan in ay waayaan shaqadooda.
In duuliyaasho ku dhici kari waayaan in ay urur shaqaale ahaan isku abaabulaan, ma ahan wax la aqbali karo, ayey aminsantahay wasiirada suuqa shaqada Hillevi Engström.
- Maya, waxaan u arkaa wax aan gabi ahaanteed la aqbali karin. Waayo xaquuqda in laga mid noqdo urur shaqo waa xaquuq insaan oo ku xusan baaqyada caalamiga ah. Sidaas darteed waa arin aas'aasi ah in uu ruuxa is abaabuli karo oo uu urur shaqaale kamid noqon karo ayey tiri Hillevi Engström wasiirada arimaha suuqa shaqada.
Xaalada ka jirta Ryaniar iyo shirkado kale oo xaquuqda qofka u leehayey in uu kamid noqdo urur shaqaale lagu tunto waa arin looga fadhiyo in EU wax ka qabato, ayuu xisbiga mucaaradka ah ee Socialdemokratiga aaminsanyahey. Sidoo kale xisbiga Vänsterpartiet ayaa horey uga dalbatey EU in lagu qoro xaquuqda kamid ahaansha urur shaqaale borotool gooni ah.
Ryanair ayaa kamid ah shirkadaha ugu waaweyn Yurub ee lagu raaco qiimo jaban. Shirkadan ayaa waxaa ka howl-gala ku dhawaad 3.000 oo duuliyaal. Balse shirkada ayaa sannooyin badan loo jeedinayey eedeyn ku sabsan sida ay ula dhaqanto shaqaalaheeda.